China White Oak Multifunctional Ugboro abụọ Bed Solid Wood Bed Bed # 0113 Manufacture and Factory | Yamazonhome
White Oak Multifunctional Ugboro abụọ Bed Solid Wood Ime Bed # 0113
Aha: Akwa ụra
Nọmba nlereanya: Amac-0113
Size: 1570 / 1870mm * 2100 * 890mm
E ji osisi siri ike rụọ ihe ndina ahụ
Oak ocha nke edere site na North America nwere ederede siri ike, na-adịgide adịgide, ma na-adịkwa mma. Ọ bụ otu n'ime oke ọhịa dị elu ma dị mma karịa ọtụtụ nnukwu oaks na ahịa. Mkpụrụ osisi ahụ doro anya ma na-enwu gbaa, osisi ahụ siri ike ma bụrụ nke okike, dina n'elu ya, dị ka a ga - asị na ị nọ na nnukwu Nnabata nke okike, ndị mmadụ nwere ike ihi ụra n'udo. Ihe ndina osisi 100% siri ike enweghị usoro ndị ọzọ. Ọ nwere ọdịdị kpochapụwo n'ezie, akọnuche dị ọcha, usoro siri ike, yana nyocha ọhaneze maka afọ 50.
Edoziri akwa akwa osisi siri ike
Okpokoro osisi osisi siri ike na-ebu ibu nke ezinụlọ. Nke a na-bed abụọ nwere a siri ike Ọdịdị na agafeela static mgbali ibu agba ule. Kwesighi ichegbu onwe gị gbasara nkwado kwụsie ike ma hie ụra n'udo. Ahịrị a bụ nke osisi oak siri ike, nwee isi abụọ. Kwado ụkwụ iji kwado matrasị ahụ.
Multifunctional àkwà oghere
Oghere nchekwa nchekwa dị n'isi akwa, ihe nkwụnye ụgwọ + oghere USB na-akwụ ụgwọ, na-ewepu mkpa maka ike ike, nchekwa nchekwa, ekwentị mkpanaaka, iko anaghịzi enwe ebe ọ bụla ị ga-etinye, hapụ gị ịchụ egwuregwu ahụ, rie ọkụkọ na-enweghị nrụgide. Ma ọ dịkarịa ala mgbe agba anọ Naanị jiri "ọzụzụ" dị mma nwere ike izute gị. Mee ka njigide akwara na nkwonkwo ike sie ike, ikike ibukwa ibu dịwanye ike.
Akwa-ngwaike ngwaike edozi akwa
Ngwa akụrụngwa dị elu na-agbatị ahụ bed, nke siri ike ma dịgide, ọ dịghị mfe nchara, na akwa akwa osisi siri ike nwere ikike dị ike karị. Mbadamba ahụ dị jụụ na-egbochi plank na akwa n'elu ịhịa aka, na-ehi ụra na-enweghị ndabichi mkpọtụ, na-enye gị ohere ịrahụ ụra ngwa ngwa. Enwere ike ijikọ nnukwu azụ azụ nwere ike ịdabere na ọdụm ahụ dị mma, na igwu egwu na ekwentị anaghị emerụ anya gị.
Ujo otu akwa akwa ụkwụ
Ejiri T-beam dị n'okpuru akwa ahụ, ihe ndị ahụ abụghị ihe doro anya, a na-ejikwa osisi siri ike mee ihe, nkwado atọ, mgbatị akwa bụ MAX, enweghị ntụgharị, ụra na-ekwe nkwa. Sa bedin ,yenangweon phọ, aBaibul phọ odị. Ezubere mgbe ọtụtụ nyocha Mgbe ị nwere akwa akwa kwesịrị ekwesị, ụmụaka nwere ike ịnọdụ ala na ya n'ụzọ dị mfe, na enwere ohere sara mbara na ala maka ịwụnye akpụkpọ ụkwụ, wdg.
Osisi dị mfe nke oge a akwa abụọ
Ihe ndina osisi siri ike nke nwere ike igosipụta mmụọ nke amamihe site na nhọrọ ihe ịhọrọ ka ọ dị
Anyị na-achọ akụrụngwa n'ụwa niile
Ejiri nlezianya ahọrọ wee hụ osisi oak kachasị elu
Naanị iji mepụta amamihe a dị ọcha
Mfe na ịdị irè bara uru na ya
Nke gara aga: N'ogbe DWF inflatable yoga ute omenala egwuregwu ikuku egwu Gymnastics Tumbling Airlọ Ikuku 0393
Osote: Obere Ime ụlọ Ifuru Ime Anyanwụ Siri ike Bed Bed Bed # 0114
Kọmputa Desk Dị Mfe Modular Ngwá Ọrụ 0314
Inflatable Surfboard Sup ọduọ Yoga naa Boa ...
Ọzụzụ Taekwondo Ikuku Mattressing Air ...
Hutch Animal Hutch na Ramp 0243
Ime ụlọ ngwá ụlọ akpụkpọ anụ nke oge a siri ike osisi ...